परम्परागत प्रकाश स्रोत भन्दा एलईडी इलेक्ट्रनिक स्क्रिनका फाइदाहरू के हुन् - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन इनडोर र आउटडोर होर्डिंगमा प्रयोग गरीन्छ, प्रकाश बक्सहरू, प्रदर्शन काउन्टरहरू समर्पित LED प्रकाश उत्पादनहरू. परम्परागत विज्ञापन प्रकाश स्रोतहरू प्राय: फ्लोरोसन्ट बत्ती प्रयोग गर्दछन्, तापक्रमित बत्तीहरू, टंगस्टन हलोजन बत्तीहरू, धातु halide lamps, आदि. यी प्रकाश स्रोतहरु को धेरै दोषहरु छन्, जुन समयको विकासको गतिसँग रहन सक्दैन, र बिस्तारै LED प्रकाश स्रोतहरू द्वारा हटाइएको छ.
एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वातावरण संरक्षण को विशेषताहरु छ, ऊर्जा बचत, लामो सेवा जीवन र सुन्दर प्रकाश रंग. सबै भन्दा पहिले, ऊर्जा बचत को मामला मा: एलईडी लाइट बक्सको उर्जा दक्षता उपयोग दर यत्तिकै उच्च छ 80%, र ऊर्जा खपत परम्परागत एलईडी प्रकाश बक्सको एक दशांश मात्र हो. परम्परागत एलईडी लाइट बक्स अल्ट्रा पातलो एलईडी बत्ती बक्स भन्दा प्रति घण्टा W००W अधिक उर्जा खपत गर्दछ. साधारणतया, 60% फ्लोरोसन्ट बत्तीको बिजुली लाई प्रकाश ऊर्जामा रूपान्तरण गरियो, र 30-40% बिजुली को तातो ऊर्जा मा रूपान्तरण गरिएको छ. उनीहरु मध्ये, 200डब्ल्यू बिजुली गर्मी उर्जा उत्पन्न गर्दछ. शपिंग मल्लहरूमा, वातानुकूलनले २००W बिजुलीबाट उत्पन्न गर्मीको उर्जालाई सन्तुलनमा राख्न २००--3०० डलरको शक्ति खपत गर्दछ. यसरी, क्षेत्रको साथ अल्ट्रा पातलो एलईडी लाइट बक्स3वर्ग मीटरले परम्परागत एलईडी लाइट बक्सको तुलनामा प्रति घण्टा 800W बचत गर्दछ.
दोस्रो कुरा, यसले परम्परागत प्रकाश स्रोत भन्दा ठाउँ बचत गर्दछ. परम्परागत एलईडी प्रकाश बक्स को मोटाई सामान्यतया 20 सेमी, र स्तम्भको चौडाई १०० सेमी. त्यसपछि एलईडी लाइट बक्स स्तम्भको चार पक्षको साथ कब्जा गर्दछ 0.8 शपिंग मल्ल स्पेसको वर्ग मीटर. अल्ट्रा पातलो एलईडी लाइट बक्सको मोटाई केवल २.6 सेमी हो. एउटा स्तम्भ चार पक्षले घेरेको छ, र शपिंग मल्ल स्पेस हो 0.01 वर्ग मीटर, जसले बचत गर्न सक्दछ 0.7 वर्ग मीटरको ठाउँ र 10 को स्तम्भहरू7वर्ग मीटर. यसरी, हामी धेरै कोठाको पैसा बचाउन सक्छौं.
त्यहाँ एक राम्रो प्रदर्शन प्रभाव छ, समान प्रकाश, कुनै पसल छाया, उच्च र reduction्ग कटौती. उपकरण सुविधाजनक र छिटो छ, र परम्परागत एलईडी लाइट बक्स सार्न सजिलो छैन र फेरि प्रयोग गर्न सकिन्न. अल्ट्रा पातलो एलईडी लाइट बक्स सजीलै सार्न र पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ. बक्स को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ 10 बर्ष. उपकरणको शक्ति द्वारा सुधार गरिएको छ 50% र श्रम लागत धेरै कम छ. हामी बाहिरबाट देख्ने एलईडी लाइट बक्स सधैं चम्किरहेको हुन्छ, जुन हाम्रो स्थिर दृश्य स्थानमा हाम्रो दृश्य प्रभाव सुधार गर्न धेरै प्रभावकारी छ. यो अब द्रुत गतिको जीवनमा छ र सहरका मानिसहरूले दबाब सहन्छ निस्सन्देह दृश्य थकान कम गर्नमा भूमिका निभाएको छ।.
LED इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनले नयाँ अल्ट्रा ब्राइट एलईडी ग्रहण गर्दछ, एलईडी को विशेषताहरु धेरै स्पष्ट छन्, र यसको एलईडी स्पेक्ट्रम देखिने प्रकाश ब्यान्डमा लगभग केन्द्रित छ, ताकि यसको चमकदार शक्ति पुग्न सक्दछ 80 ~ 90%. विश्वको अवधारणामा, ऊर्जा बचत बत्तीहरूले ऊर्जा बचाउन सक्छ4/ 5, जुन अब एक ठूलो नवीनता छ. तर अप्रत्याशित रूपमा, एलईडी ऊर्जा बचत बत्तीहरू भन्दा बढी ऊर्जा बचत हो, जुन प्रकाशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो नवीनताका रूपमा परिचित छ. थप, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनका धेरै फाइदाहरू छन्. विज्ञापन उद्योग को विकास संग, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनको धेरै ठूलो बजार सम्भावना छ.
LED भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन लागतको लागि उचित बजेट